Wararkii ugu dambeeyay ee cudurka Coronavirus ee caalamka | Xaysimo
Home War Wararkii ugu dambeeyay ee cudurka Coronavirus ee caalamka
Dalkaasi muddo saddex daqiiqadod ah waxaa gebi ahaanba la joojiyay dhaqdhaqaaqii taas oo lagu xusayay dadkii ay waxyeellada ka soo gaartay cudurkaasi.
Xus loo sameeyay dadkii cudurka coronavirus uu ku dilay waddanka Shiinaha
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay dowladaha caalamka ugu baaqday in aanay cudurkan safmarka ah u isticmaalin marmarsiiyo ay dadka ku cabburiyaan.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay soo qaadday awoodaha lagu soo rogay waddanka Hungary taas oo ra’iisul wasaare Viktor Orban u ogolaanaysa inuu dalkaas maamulo muddo aanan la cayimin.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa sheegay in dalkiisa uu danaynayo inuu ka qeybqaato tijaabada tallaalka cudurka coronavirus.
Waxa uu hadlayay xilli laba dhakhtar oo Faransiis ah lagu dhaleeceeyay in taleefishin ay ka sheegeen in tallaalka ay tahay in lagu tijaabiyo qaaradda Afrika.
Soomaaliya oo laga xaqiijiyay kiisas cusub
Dr. Cabdirisaaq Yuusuf Axmed ka tirsan Guddiga sare ee ay Dowladdu u xilsaartay xakamaynta xaaladaha COVID-19 ayaa Bulshada usoo jeediyay in aysan qarsan haddii ay isku arkaan calaamadaha xanuunka, isagoona sheegay inuu ka cabsi qabo inuu Dalka ku Laba qarxo maaddaama ay Dadka qaarkii qarsanayaan.